''လူငယ်တွေရဲ့ ဇာတ်ကားတွေ ထွက်လာတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဒီ ဟာသ ဇာတ်ကားတွေက ပြောင်းကိုပြောင်?? - Yangon Media Group
ဒါရိုက်တာ ဝါဝါဝင်းရွှေ ရိုက်ကူး နေသည့် ”ရှင်ဥပဂုတ္တ မထေရ်မြတ်ကြီး ထေရုပတ္တိတော်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွင် တွဲဖက်ဒါရိုက်တာအဖြစ် ပါဝင်သွားမည့် ဒါရိုက်တာ ဟိန်းစိုးကို ယခုလို မေးမြန်း ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
မေး- ဘာသာရေး ဇာတ်ကားရိုက်တာနဲ့ အခြားဇာတ်တွေ ရိုက်ကူးတာနဲ့ ရိုက်ကူးရတာ ဘယ်လိုကွာခြား မှုတွေရှိမလဲ။
ဖြေ- ဘာသာရေးကားရိုက်တယ်ဆိုတာ အခြားဇာတ်ကား တွေထက်တော့ ပိုပြီးတော့ တာဝန်ကြီးပါတယ်။ ပြောရရင်တော့ ရုပ်ရှင်ဆိုတာ ဘာသာရေးဇာတ်ကားမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်ဇာတ်လမ်းမဆို ဖြစ်သလိုလုပ်လို့ရတဲ့ အလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာသာရေးဇာတ်ကားဆိုတော့ ကိုယ်တွေလည်း အဓိဋ္ဌာန်နဲ့ ရိုက်ရတယ်။ ပီပီပြင်ပြင်ဖြစ်အောင်ရိုက်ဖို့ ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် လေးတွေတော့ ရှိပါတယ်။
မေး- တွဲဖက်ဒါရိုက်တာအဖြစ် ပါဝင်ဖြစ်ပုံနဲ့ ပြင်ဆင်မှုအပိုင်း တွေကိုလည်း ပြောပြပေးပါ။
ဖြေ- ရိုက်ကွင်းနေရာတွေကတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲသွားကြည့်ပါတယ်။ တံငါရွာတွေ၊ ရှေးဟောင်းနေရာတွေကို တူအောင်လိုက်ရှာရပါတယ်။ ဇာတ်ကတော့ သူ့ရဲ့ဘာသာရေး ဇာတ်ကြောင်းအတိုင်းရိုက်ကူးရမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့က ဒီဇာတ်ကားက ဘာကြောင့်ကောင်းသွားနိုင်မလဲဆိုတော့ အရင် ခေတ်ကနဲ့ မတူတဲ့ဟာတွေက ကွန်ပျူတာ Effect တွေ သာသွားမှာပါ။ အရင်ကဇာတ်ကားနဲ့တော့တူမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
မေး- အခုနောက်ပိုင်းမှာ ရုပ်ရှင်ပိုင်းမှာ မျိုးဆက်သစ်လူငယ် တွေ အများကြီးပေါ်လာတယ်။ နောက် ပရိသတ်တောင်းဆိုမှု တွေကြောင့် ဟာသဇာတ်ကားတွေလည်း အများကြီးဖြစ်လာ တယ်ဆိုတော့ ဝါရင့်ဒါရိုက်တာတစ်ဦးအနေနဲ့ ဘယ်လိုသုံးသပ်ချင်လဲ။
ဖြေ- ခေတ်ကပြောင်းသွားဦးမှာပါ။ ဟာသဇာတ်ကားတွေရဲ့ ခေတ်က ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်လောက်အထိကို ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီလူငယ်လေးတွေကလည်း သူတို့ပညာကို ဇာတ်အရ၊ ကင်မရာအရ လိုက်တင်အရ ကောင်းအောင်လုပ်ကြတယ်။ အားပေးပါတယ်။ ဒီကလေးတွေရဲ့ဇာတ်ကားတွေ ထွက်လာတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဒီဟာသဇာတ်ကားတွေက ပြောင်းကို ပြောင်းရတော့မယ်။ မပြောင်းလို့ မရတော့ဘူး။ ဘာကြောင့် လဲဆိုတော့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်အဆင့်အတန်းက အရှေ့တောင်အာရှ လောက် Level မီနိုင်တဲ့ အဆင့်အတန်းရှိမှ တိုးတက်မယ်။ အခုဟာကကျတော့ ငွေရေးကြေးရေးနောက်ကို လိုက်နေကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း ငါးရက်ကို ဇာတ်ကားတစ်ကား လောက်ဆိုတော့ ရိုက်လည်း မရိုက်တော့ပါဘူး။ အလုပ်လည်း မရတော့ပါဘူး။ ပရိသတ်အလိုကျ ဟာသဇာတ်ကားတွေရိုက်တာကတော့ သူသူကိုယ်ကိုယ် ငွေလိုချင်လို့ရိုက်ကြတာမျိုး ရှိပါတယ်။ တကယ့်ဝါရင့် ဒရာမာဇာတ်ကား တွေပဲရိုက်တဲ့သူတွေ တောင် ဟာသဇာတ်ကားတွေ ပြောင်းရိုက်နေတဲ့ သာဓကတွေလည်းရှိပါတယ်။
'ကိုယ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကား အထူးပွဲပြသတဲ့အခါ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက် အနေနဲ့ ကြည့်ဖြစ်အောင် ?
“ပညာရေးရော အနုပညာအလုပ်တွေကိုရောညီမျှအောင် လုပ်သွားမယ်လို့ စဉ်းစားထားပါတယ်”